के हो यौन दुर्बलता ? समाधानका उपाय के के छन ? | Nepali Health
२०७३ मंसिर ६ गते १०:५१ मा प्रकाशित
के हो यौन दुर्वलता ?
सामान्य अर्थमा यौन इच्छामा कमी हुनुलाई यौन दुर्वलता भनिन्छ । यसको लक्षण मानसिक तथा शारीरिक दुबै रुपमा देख्न सकिन्छ । यौन इच्छामा कमि हुनु, यौन सम्पर्कमा रुची नहुनु जस्ता कुराले मानसिक रुपमा यौन दुर्वलताको संकेत गर्दछ भने यौन इच्छा वा सम्पर्कका बेला लिंगमा कडापन नआउनु, मोटो वा ठूलो नहुनु शारीरिक रुपमा देखिने यौन दुर्वलताको संकेत हो । अर्थात यो या त्यो जुनसुकै कारणले पनि यौनको भोग नलाग्नु वा यौनको प्यास मेटन नसक्नु यौन दुर्वलता हो ।
यौन दुर्वलता देखिनुको प्रमुख कारण मनोविज्ञान, तनाव, हर्मोनमा कमि र पुरुषहरुमा प्रोस्टेटको संक्रमण हुनु हो । त्यसबाहेक व्यक्तिको खानपान, रहनसहन तथा जीवनशैलीले पनि यौन दुर्वलता बढाउन लागि मद्धत गर्छ ।
यौन दुर्बलता हुनुका मुख्य कारणहरु के के हुन् ?
यौन दुर्बलता एक दुईवटा कारणहरुले हुने होइन । यद्धपी केही यस्ता कारण छन् त्यसले अन्य स्वास्थ्य समस्यासंगै यौन दुर्बलतामा अधकेल्छ नै । त्यस्तो कारणमा प्रमुख रुपमा आउँछ धूमपान ।
लिंगमा मसिना रक्तनली हुन्छन् धूमपानले ती मसिना रक्तनलिलाई साघुरो बनाउछ । जसले लिंगमा रक्तप्रवाहमा अवरोध पैदा हुन्छ । जव रक्तप्रभाव नै बन्द भयो भने लिंगमा कडापन हुन सक्दैन् ।
त्यस्तै मध्यपान, उच्चरक्तचाप, मधुमेह, तथा छारेरोगको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै बोसोयुक्त मासुको सेवन, उच्च कोलेस्ट्रोल, मोटोपना र प्रोस्टेट ग्रन्थीमा देखिने दीर्घकालिन संक्रमणले यौनक्षमतामा ह्रास भई यौन दुर्वलताको समस्या हुने गर्छ ।
पुरुषहरुमा आर्थिक तथा सामाजिक समस्या तथा तनावले सेक्स हर्मोनको स्तरमा गिरावट हुनसक्छ र यस्तो गिरावटले पुरुषको यौन इच्छा तथा काम शक्तिमा समेत असर पुर्याउछ ।
यौन दुर्बलता भएका व्यक्तिहरु शारीरिक रुपमा कमजोरी अर्थात महसुस गर्ने खालका हुन्छन् । सहबासका बेला भाग्न खोज्ने, सेक्स पार्टनरसंग तर्कने गतिविधि देखाउने गर्छन् ।
यौन दुर्बलता बढाउन सहयोग पुरयाउने तत्वहरु
व्यक्तिको चेतना प्रमुख कारण हो । अनी डाक्टरहरुसंग खुलेर नबोल्ने । यदि बोले पनि झस्किने अर्को कारण हो । त्यस्तै ब्यक्तिको शरीरमा हुने विभिन्न समस्या जस्तै : मधुमेह, लिङ्गमा बोसोको डल्ला आउनु, उच्च रक्तचाप, छारे रोग, धुम्रपान र मध्यपानको सेवन, नशा च्यापिएको आदि पनि यौन दुर्बलताका कारक तत्व मान्न सकिन्छ ।
र अन्तमा …
(# कन्सलटेन्ट युरोलोजिस्ट डा. रौनियारलाई मध्यबानेश्वरस्थित लाइफ इन्टरनेशनल क्लिनिकमा भेटन सकिन्छ ।)
जाजरकोट अस्पतालमा आधुनिक डेन्टल सेवा सुरु